Frantsa: Tsy lany tao amin’ny parlemanta ny lalàna ‘dona in-telo’ misahana ny troka “piraty” amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2019 3:29 GMT
Nanolotra fampitandremana roa ny lalàna ka avy eo, aorian'ny fanitsakitsahana fahatelo, dia fanesorana tsy hiditra aterineto mandritra ny herintaona ho an'ireo mpiserasera tratra mitroka tsy ara-dalàna tahiry (mozika na horonantsary).
Lany tao amin'ny antenimiera roa tonta ny volavolan-dalàna, ary ny ataon'izy ireo tsirairay sisa dia ny mankatoa ny lahatsoratra farany, saingy “nihanahàna tao an-dalantsara ireo sosialista 15, nampiasa ny minitra farany mba handatsa-bato sy haharesy ny lalàna”.
Mandrisika ny governemana sy ny mpanome tolotra aterineto ny orinasan'ny mozika sy ny sarimihetsika mba hampitsahatra na hampiato ireo mpizara tahiry “peer-to-peer” satria manimba ny fidiram-bolan'ny mpanakanto sy ny orinasa mpamokatra izany, saingy nisy ny tsy fahombiazana taorian'ny fitsipahana tahaka izany tany Angletera, Nouvelle Zélande, Alemaina ary na ny Parlemanta Eoropeana koa aza.
Nilaza kosa i Sarkozy fa tapa-kevitra ny hijery ny lalàna nolaniana izy ary niampanga ny mpanohitra ao amin'ny parlemanta ho manao fanodikondinana.
Mikasa hitondra indray ilay volavolan-dalàna amin'ny 27 aprily ny minisitry ny kolontsaina.
Nilaza ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny indostrian'ny fikajiana feo sy ny namany manerantany ao amin'ny RIAA, fa mbola hanohy handresy lahatra hisian'ny lalàna dona in-telo Frantsay izy ireo.